I-Hansa Sea Valley Two kwindawo enye ekufutshane kodwa epholileyo - I-Airbnb
I-Hansa Sea Valley Two kwindawo enye ekufutshane kodwa epholileyo
Igumbi elise- indlu ebuhotele sinombuki zindwendwe onguElia
UElia unezimvo eziyi-45 zezinye iindawo.
Wamkelekile kwi-Hansa Sea Valley Suite ngokugqibeleleyo ukusuka kwisayithi ye-Byblos archevaila kunye neebhari zobomi basebusuku ezonwabisayo ecaleni kwendawo yelifa lemveli lase-Byblos. Eli gumbi lilungele abantu abathandanayo, abafundi, kunye nabo bathanda ukuba nekhitshi labo, igumbi lokulala, igumbi lokuhlala kunye nebhalkhoni! Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle linefenitshala yale mihla le ibe licocwa yonke imihla. Sinomfana osebenza iiyure eziyi-24 ukuze sikuncede ngeemfuno zakho. Iindwendwe zinokonwabela i-wifi yasimahla, ikhitshi elinento yonke kunye nemarike esemagqabini ekufutshane ikufuphi
IHansa Home Sea Valley Aparthotel, iHalat, iByblos, iLebanon ephakathi kwezixeko zembali zaseByblos naseJounieh kunye neendawo zazo zokhenketho, amaziko enkcubeko, amaziko oshishino kunye namaziko ezonyango. Iikholeji zethu zisoloko zikuvuyela ukulungiselela zonke izicelo zakho kwaye ziqinisekisa ukuba uhlala kamnandi kwaye ukhululekile.
Ime kwi-Halat phezu kwegquma elihle laseBeirut, ulwandle lweMeditera kunye ne-Adonis Valley, liphakathi kweJounieh Bay kunye neByblos Port. Imizuzu nje embalwa kwaye unokonwabela ubumnandi basebusuku bezixeko zombini, iivenkile zokutyela ezisecaleni kolwandle, ii-souks ezindala, imbali yasekuhlaleni kunye nazo zonke iimfuno zeshishini lakho. Iiyunivesithi ezidumileyo ze-Casino de Liban, i-aut ne-CNAM, kunye ne-KMC (AUBMC) kunye ne- "Saydat Al Maounat" (USEK) zonyango zikumgama omfutshane. I-Hansa Home Sea Valley iza kukunika bonke ubutofotofo nobunewunewu kwindawo ebangela umdla egcwele ubomi.
I-Hansa Home Sea Valley ekwiHalat phezu kwegquma elihle laseBeirut, ulwandle lweMeditera kunye neAdonis Valley, liphakathi kweJounieh Bay kunye neByblos Port. Imizuzu nje embalwa kwaye unokonwabela ubumnandi basebusuku bezixeko zombini, iivenkile zokutyela ezisecaleni kolwandle, ii-souks ezindala, imbali yasekuhlaleni kunye nazo zonke iimfuno zeshishini lakho. Iiyunivesithi ezidumileyo ze-Casino de Liban, i-aut ne-CNAM, kunye ne-KMC (AUBMC) kunye ne- "Saydat Al Maounat" (USEK) zonyango zikumgama omfutshane. I-Hansa Home Sea Valley iza kukunika bonke ubutofotofo nobunewunewu kwindawo ebangela umdla egcwele ubomi.
Iivenkile zokutyela e-Halat: Ivenkile ethengisa ukutya okukhawulezayo kweCorano kunye neCentralk Al Tawouk, eyindawo ekhethekileyo yokutya okukhawulezayo yenkukhu kunye nevenkile yokutyela yokutya okukhawulezayo ukongezelela kwiChezwagend & Le Blanc Blue kokubini iivenkile zokutyela ukutya kwaselwandle kunye nezinye ii-Resto-Pubs ezininzi eByblos souk yakudala
Umbuki zindwendwe ngu- Elia
Ihotele iHansa Ehlabathini lonke yasekwa ukususela ngo-1907 kunye neofisi yethu ephambili eBerlin apho sikhangela izindlu ezingaphezu kwe-73 emhlabeni wonke ukongezelela kwinqanawa yokuhamba. Iofisi yethu yokumela umthetho kummandla we-MENA & Levant ngokusemthethweni yi-Bey-Roth The Incentive Travel Co. Ltd. esesitratweni i-St. George Kufuphi ne-Al Roum St. George Hospital phambi kwebhanki ye-Blum Rmeil, i-Zakour Bldg 6th floor - Rmeil - Achrafieh - Beirut - Lebanon. Sineenkonzo zeeyure eziyi-24 kunye nomnxeba wemeko yongxamiseko ukongezelela kwinkonzo epheleleyo ye-chauisineur kunye nabaqhubi bethu abayazi kakuhle indlela yelizwe kunye nokuhamba kwabantu. Iqela lenkxaso elizimiseleyo ukuthatha le nto yongezelelweyo ukuze lihlangabezane nabathengi abafuna kakhulu. Nangona kunjalo, akukho mali yongezelelweyo yeenkonzo ezinikezelweyo eziza kukunika uxolo lwexesha kunye nokuhlala okungenakulibaleka kuzo zonke Izindlu zethu zaseHansa esikhethe ngokucokisekileyo ngokuqwalasela yonke imigangatho engqongqo yamazwe ngamazwe.
Ihotele iHansa Ehlabathini lonke yasekwa ukususela ngo-1907 kunye neofisi yethu ephambili eBerlin apho sikhangela izindlu ezingaphezu kwe-73 emhlabeni wonke ukongezelela kwinqanawa…